အိန္ဒိယခရီးစဉ် (၅) - Calm Hill
ဟာရေဝါ (Haridwar) မှာ တရက်လောက် လှည့်လည်သွားပြီးတော့ နောက်တရက်မနက် အစောမှာတော့ နောက်ထပ် ဘုရားကျောင်းတွေရှိတဲ့ ရီရှိကေ့(ရှ်) (Rishikesh) ဆိုတဲ့ မြို့ကလေးကို ခရီးဆက်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရတယ်။ မနက်စောလွန်းရင်လည်း နှင်းတွေကျနေလို့ ကားမောင်းလို့မရတော့ သိပ်လည်းမစောပါဘူး ၈ နာရီလောက်မှပဲ Airbnb အိမ်က အန်တီကြီးကို နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ Check-out လုပ်ကြရတယ်။ အန်တီကြီးက ကော်ဖီတိုက်နေတာနဲ့ ခဏထိုင်ပြီးတော့ စကားပြောပြီးမှပဲ ရီရှိကေ့(ရှ်) ကို ခရီးဆက်ကြပါတယ်။ ရီရှိကေ့(ရှ်) နဲ့ ဟာရေဝါက သိပ်အဝေးကြီး မဟုတ်ပေမယ့် တောင်ပေါ်ဖြစ်နေတော့ တနာရီလောက်တော့ ကားမောင်းရပါတယ်။
ရီရှိကေ့(ရှ်)မြို့လေးက အရွယ်အစား မကြီးပေမယ့် ယောဂ (Yoga) နဲ့ပတ်သက်ပြီး နာမည်ကြီးပါတယ် ယောဂမြို့တော်လို့ တင်စားပြီး ခေါ်ကြတာရှိသလို ဟိမဝန္တာတောင်တန်းစပ်မှာ တည်ရှိတဲ့အတွက် Trekking Camp တွေတို့ တခြားစွန့်စားစရာ အစီအစဉ်တွေ အတော်များများ လုပ်လို့ရတာတွေ ရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားသား ယောဂခရီးသည်တွေ စွန့်စားချင်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ မြို့လေးအဖြစ်နဲ့ စည်စည်ကားကား ရှိပါတယ်။ ရှေးအခါတုံးက ရီရှိကေ့(ရှ်)မြို့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ရာမာယန (Ramayana) ဇာတ်ထဲက ရာမ (Rama) မင်းသား အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြသလို ဂင်္ဂါမြစ်ဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဟိန္ဒူတွေအတွက် ဘုရားကျောင်းတွေလည်း အများကြီးရှိသလို အရေးကြီးတဲ့ အထွဋ်အမြတ် နယ်တခုလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ဟာရေဝါလိုပဲ ဟိန္ဒူဘုရားဖူးတွေလည်း ပြည့်နေလေ့ရှိပါတယ်။
ဟာရေဝါကနေ ရီရှိကေ့(ရှ်) ကို ရောက်တော့ မနက်ပိုင်း ၉ နာရီ ကျော်ကျော်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ရီရှိကေ့(ရှ်) ကို ရောက်တော့ မြို့ကိုကျော်ပြီး ဆက်မောင်းလာတော့ ဘယ်သွားမှာလဲလို့ ဘာဒရီတို့ လင်မယားနဲ့ ညီမဖြစ်သူကို မေးလိုက်တော့ ဒီနေ့ငါ့တို့အတွက် စွန့်စားခန်းအသစ်ရှိတယ် ရောက်တဲ့အခါ သိရမှာပါပဲ ပြောပြီးတော့ ရယ်နေကြတယ်။ ဆက်မောင်းလာရင်းနဲ့ ၉ ခွဲလောက်မှာ ရှီပူရီ (Shivpuri) ဆိုတဲ့နေရာကို ရောက်တော့မှ ဂင်္ဂါမြစ်ထဲမှာ Whitewater rafting လုပ်မယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ထားမှန်း သိရတော့တယ်။ ဒီလောက်အေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ မကြောက်မရွံ့နဲ့ လှိုင်းတွေထဲမှာ လှေလှော်မယ်ဆိုတော့ စီစဉ်တာတော်တယ်ပဲ ရွဲ့ပြီးတော့ ပြောရမလားမသိ။ လှေလှော်ဖို့အတွက် ၅ ကီလိုမီတာ ကစပြီးတော့ ၁၆ ကီလိုမီတာအထိ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ သတ္တိကောင်းစွာနဲ့ တယောက်က ရေမကူးတတ်သလို လှေလှော်ဖူးကြတဲ့ လူတယောက်မှ မပါကြပဲနဲ့ ၁၆ ကီလိုမီတာ သွားဖို့အတွက် လက်မှတ်ဝယ်ကြတယ်။
Rafting အတွက် အဝတ်တထည် ကိုယ်တခုအပြင် ကင်မရာတို့ တခြားပစ္စည်းတွေ ယူလို့မရပါဘူး။ ဖုန်းတွေကတော့ နည်းပြလုပ်တဲ့လူက ရေစိုခံအိတ်ထဲမှာ သယ်လာပေးတယ်။ လေလုံတဲ့ ကင်းဗတ်အင်္ကျီနဲ့ အသက်ကယ်ဝတ်စုံ တစုံစီလည်း ထုတ်ပေးတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ကိုယ့်ကားပေါ်မှာပဲ အကုန်ထားခဲ့ပြီးတော့ ကားဆရာကို ကိုယ်တွေရောက်လာမယ့် နေရာကနေသွားပြီး စောင့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ခြောက်လွယ်မယ့် ဘောင်းဘီနဲ့ တီရှပ်တွေလဲပြီး ရာသီဥတုကလည်း အေးတဲ့အတွက် လေလုံတဲ့ ကင်းဗတ်အင်္ကျီတွေ ထပ်ဝတ်ရပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးကနေမှ အသက်ကယ်အင်္ကျီနဲ့ ဦးထုပ်တွေ ဆောင်းကြရတယ်။ မြစ်ကမ်းစပ်အထိ သွားဖို့အတွက်က Rafting ကုမ္ပဏီကပဲ တာဝန်ယူပါတယ်။ နည်းပြတယောက် ထည့်ပေးလိုက်ပြီး နည်းပြကိုယ်တိုင်ပဲ Land Rover ကားတစီးနဲ့ တောင်တွေကြားထဲ မြစ်ကမ်းဘေးက Rafting ဆိပ်အထိ ခေါ်သွားပေးတယ်။
Rafting ဆိပ်မှာ လှေပေါ်မတက်ခင်မှာ အသက်ကယ် ဝတ်စုံတွေကို နည်းပြလုပ်သူက စစ်ဆေးပြီးတော့ လှော်တက်တယောက် တချောင်းစီကိုင်ခိုင်း ဘယ်လိုဘယ်ပုံ လှော်ရမယ်ဆိုတာ အရင်ပြပါတယ်။ Rafting လုပ်ဖူးတဲ့လူ ဘယ်သူပါလဲမေးတာ Rafting မပြောနဲ့ ရေမကူးတတ်တဲ့ လူတောင် ပါတယ်ဆိုတော့ နည်းပြလုပ်သူလည်း အားတက်သွားရှာတယ်။ အသက်ကယ်ဝတ်စုံပါတယ် ခေါင်းရိုက်မိတောင် ဦးထုတ်ပါတယ် ၄၈ နာရီတော့ ရေမမြုတ်နိုင်ပါဘူး အေးပြီးတော့ ခဲချင်ပဲခဲမှာပါလို့ အားပေးရှာပါတယ်။ လှေပေါ်တက်ပြီး ထရိန်နင်အနေနဲ့ လှေလှော်သင်ရတယ် Get down! လို့အော်လိုက်ရင် တက်တွေမပြီးတော့ လှေထဲကိုဝုန်းဆိုပြီး ချက်ချင်းဝပ်ရတယ် Forward! ဆိုရင် အမြန်ပြန်နေရာယူ အင်တိုက်အားတိုက် ပြန်လှော်ရတယ်။ လှော်တဲ့အချိန်မှာလည်း Twinkle Twinkle Little Star! Ganga Maiya Superstar! Hay Ho! Hay Ho! ဆိုပြီးတော့ သံပြိုင်လည်း အော်ရသေးတယ်။
ရေစီးငြိမ်တဲ့ Rafting ဆိပ်ကစပြီး ထွက်ကာစမှာ ပျော်ပျော်ကြီး အော်ဟစ်နေပြီးတော့ လှေလှော်လာလိုက်တာ ပထမဆုံး လှိုင်းကြမ်းရေစီးသန်တဲ့ Small Rapid ဆိုတဲ့ အနားရောက်တော့ Get down! ဆိုတာပဲ နောက်ဆုံးမှာ ကြားလိုက်တယ် လှေတစီးလုံး ဝုန်းဒိုင်းကြဲတော့တာပါပဲ။ ခဏနေတော့ Forward! ဆိုတဲ့ အသံကြားတော့ ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ နေရာပြန်ယူပြီး အတင်းလှော်ကြရတယ် လှိုင်းကြမ်းထဲမှာ လှော်သာလှော်နေတာ ရွေ့တယ်လည်း စိတ်ကမထင်ပါဘူး။ ရေစီးနဲ့ဆိုတော့ မလှော်တတ်လည်း လှေကြီးက ရပ်တော့မနေပါဘူး နည်းပြဖြစ်သူက တက်ကိုင်ပေးတော့ အချိန်တန်တော့ လှိုင်းကြားကနေ လွတ်တော့လွတ်ပါတယ်။ ပထမလှိုင်းလွတ်တော့ နောက်လှိုင်းတွေက ဒီထက်ကြမ်းဖို့ရှိတယ် လှေမှောက်ရင် ရေထဲကျချင်ကျမှာ အသားကျအောင်လို့ ရေထဲခုန်ချကြလို့ နည်းပြကခိုင်းလို့ ရေထဲခုန်ချရတယ်။ ရေခဲတောင်ကနေ စီးဆင်းလာတဲ့ ဟိမဝန္တာထဲက ဂင်္ဂါမြစ်ရေဟာ ရေခဲရေဆိုတာ့ ဘုရားတယူရတယ်။ ရေထဲမှာကူးရင်းနဲ့ ခဏနေတော့မှ လှေပေါ်ကိုဆွဲတင် ရေတွေကိုခါရတယ် တကိုယ်လုံးစိုပေမယ့် အပေါ်ကဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီတွေက လေလုံတဲ့အတွက် ခိုက်ခိုက်တုန်တာမျိုးမရှိပဲနဲ့ ခဏနေတော့ သာမန်လိုပါပဲ။
Small Rapid ကနေ ကျော်တာနဲ့ နောက်ထပ် Major Rapid, Rollercoaster, Upside Down စသည်ဖြင့် များများလာတော့ နာမည်လည်း မမှတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ လှိုင်းကြမ်းတွေက နာမည်တွေနဲ့ လိုက်ကြပါတယ် ကြာလာလေလေ ဆိုးလာလေလေ ကိုယ်တွေကလည်း ရိုးလာလေလေပဲ နောက်ပိုင်းတော့ အတတ်ဆန်းလာပြီး လှေအနောက်ကနေ ရေထဲခုန်ချပြီး ကြိုးနဲ့ဆွဲပြီးလိုက်တယ် အေးလာတဲ့အချိန် လှေပေါ်ပြန်တက်နဲ့ နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှာ နေ့လည်စာစားလို့ရတဲ့ Maggie Point ဆိုတဲ့ စခန်းတခုမှာ ခဏနားတယ်။ အစားအသောက်က Maggie ဆိုတဲ့အတိုင်း Maggie ခေါက်ဆွဲကို ငရုတ်သီးစိမ်း ထည့်ပြုတ်ပေးတာ သာမန်ဆိုရင် ဘယ်စားလိမ့်မလဲ လှေလှော်ပြီး ပင်ပန်းလာတော့ ခေါက်ဆွဲပြုတ် တပန်းကန်ဟာ ဘယ်လိုကုန်မှန်း မသိလိုက်ဘူး။ Maggie Point ဘေးမှာ Cliff Jumping လုပ်လို့ရတဲ့ နေရာရှိတာနဲ့ ခုန်ကြည့်ကြတယ်။ ပေ ၂၀ လောက်ပဲ မြင့်တာဆိုပေမယ့် အမြင့်ကြောက်တဲ့ ကိုယ့်အလှည့်မှာ ခုန်မချရဲလို့ ချီတုံချတုံဖြစ်နေတာ နောက်ကလူက စိတ်မရှည်လို့ တွန်းချလိုက်မှပဲ ပြုတ်ကျပါတယ်။
Maggie Point ကနေ ဆက်ပြီးထွက်လာတော့ လှိုင်းကြမ်းတာ ၂-၃ ခုလောက်လွန်တော့ ၁၆ ကီလိုမီတာ စခန်းကို ရောက်ပြီဖြစ်လို့ ကမ်းကိုကပ်ရတယ်။ ကမ်းကပ်ရတာလည်း မလွယ်ပါဘူး ရေစီးနဲ့ဆိုတော့ ရေအဆန်ကိုအတင်း ပြန်လှော်ပြီးမှ ကမ်းကပ်လို့ရပါတယ်။ စခန်းရောက်တော့ လူတွေလည်း ရေစိုလိုက် နေပူလိုက်နဲ့ ရေခဲရိုက်ထားတဲ့ငါး နေလှန်းထားသလို ဖြစ်နေကြပါပြီ။ လှေကိုသောင်ပေါ်အထိ ဆွဲတင်ပြီးတော့ နည်းပြဖြစ်သူက ကိုယ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်သွားသလို ကိုယ်တွေလည်း အသင့်စောင့်နေတဲ့ ကိုယ့်ကားပေါ်က အထုတ်တွေတွေဖွင့် အဝတ်လဲကြပြီး ရီရှိကေ့(ရှ်) ကို ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ ရီရှိကေ့(ရှ်) ရောက်တော့ တည်းရမယ့် ဟိုတယ်မှာ Check-in လုပ်တော့ ၂ နာရီခွဲလောက် ရှိနေပါပြီ ၃ နာရီခွဲမှာ လမ်းပြတယောက်နဲ့ ချိန်းထားတဲ့အတွက် အချိန်သိပ်မရဘူးဆိုပြီး အခန်းရောက်တာနဲ့ ရေချိုးအဝတ်လဲပြီး ထွက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။
ရီရှိကေ့(ရှ်)မှာ ရာမတံတား (Ram Jhula) နဲ့ လက္ခဏာတံတား (Laxman Jhula) ဆိုပြီး ဂင်္ဂါမြစ်ပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ တံတား ၂ စင်းရှိပါတယ်။ လက္ခဏာတံတား ဆောက်ထားတဲ့ နေရာဟာ လက္ခဏာမင်းသား ရှိစဉ်အခါက ဂင်္ဂါမြစ်ပေါ်မှာ ကြိုးတန်းပြီးတော့ ကူးလေ့ရှိတဲ့နေရာလို့ ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် လက္ခဏာတံတားဟာ ရာမတံတားထက် နာမည်ပိုကြီးပါတယ်။ ရာမတံတားကတော့ လိုအပ်လို့ ဆောက်ထားတာကလွဲလို တခြားဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်နဲ့ မဟုတ်တဲ့အတွက် တကူးတကလာပြီး လည်ပတ်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ ကိုယ်တွေနေတဲ့ ဟိုတယ်က လက္ခဏာတံတားနဲ့ မနီးမဝေးမှာရှိသလို လမ်းပြနဲ့ချိန်းထားတဲ့ Trayambakeshwar ဆိုတဲ့ ဘုရားကျောင်းက လက္ခဏာတံတားရဲ့ တဘက်ကမ်းမှာရှိလို့ တံတားပေါ်ကနေ ဂင်္ဂါမြစ်ပေါ်ကဖြတ်ပြီး ဘုရားကျောင်းကို ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။
ဘုရားကျောင်းရှေ့မှာ စောင့်နေတဲ့ လမ်းပြပြီးတော့ ရှင်းပြပေးမယ့်လူနဲ့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် တွေ့ပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းက ၁၃ ထပ်မြင်ပြီးတော့ ၁၂ ရာစုလောက်က စခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အဆောက်အဦးလက်ရာက ၁၂ ရာစု လက်ရာလို့ မထင်မိပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာက ဘုရားကျောင်းကို တည်ထောင်တာက ၁၂ ရာစုဖြစ်ပေမယ့် မူလဘုရားကျောင်းကို ပြန်ပြီးတော့ အသစ်ဆောက်ပုံရပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲက ဘုရားတွေ မယ်တော်တွေကတော့ အရင်လက်ရာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ဘုရားတွေက များလွန်းတဲ့အတွက်ရယ် ဘုရားတွေက တဆူထဲကို ပုံစံတွေကွဲလွန်းတော့ ရှင်းပြပေမယ့် ကြာလာတော့ ကိုယ်လည်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ အပေါ်အထပ်တွေမှာ ဘုရားတွေ မယ်တော်တွေအပြင် Lingam တွေလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိပါသေးတယ်။ ဓာတ်ပုံမရိုက်ရလို့ အောက်ဆုံးထပ်မှာ ရေးထားပေမယ့် အပေါ်ထပ်တွေမှာ ဆိုင်းဘုတ်မတွေ့လို့ ဝိနည်းလွတ်အနေနဲ့ အပေါ်ထပ်တွေမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။
ဘုရားကျောင်းကနေ ထွက်လာပြီးတော့ ရီရှိကေ့(ရှ်)မြို့ထဲမှာ ဆက်လျှောက်ရင်း ဘုရားကျောင်း သေးသေးလေး နောက်ထပ် ၂-၃ ခုလောက် ထပ်ဝင်ဖြစ်ကြတယ်။ ရီရှိကေ့(ရှ်)မှာလည်း ဟာရေဝါမှာလိုပဲ ရာမတံတားနား ဂင်္ဂါမြစ်ဘေးက ပါရမတ် (Parmarth) ဆိုတဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာ ညနေတိုင်း နေဝင်ချိန်မှာ ဂင်္ဂါပူဇာ (Ganga Puja) လုပ်တာရှိပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းတွေ လျှောက်သွားနေရင်းနဲ့ ၅ နာရီခွဲသွားလို့ ဂင်္ဂါပူဇာကိုမှီဖို့အတွက် သုတ်ခြေတင်ကြရတယ်။ ကိုယ်တွေရောက်တော့ နည်းနည်း နောက်ကျပေမယ့် အချိန်မှီပါသေးတယ်။ ဟာရေဝါမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ လူထောင်ချီတဲ့ ပရိတ်သတ်မျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် အသေအချာမြင်ခွင့်ရသလို အေးအေးဆေးဆေး ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်။ ၇ နာရီလောက်မှာ ဂင်္ဂါပူဇာပြီးသွားတော့ ပန်းလေးတွေ ငှက်ပျောဖက် လှေလေးထဲထည့် ဆီမီးထွန်းပြီး ဂင်္ဂါမြစ်ရေမှာ မျှောတဲ့ပွဲလည်းရှိပါတယ်။ မီးမျှောပွဲပြီးတော့ ကိုယ်တွေအဖွဲ့တဲ့က ဘာဒရီက သူရေချိုးရမှာက ဟာရေဝါမှာ မဟုတ်ဘူး ရီရှိကေ့(ရှ်)မှာဆိုပြီး ဘုရားကျောင်းဘေးက ဂင်္ဂါမြစ်ထဲမှာပဲ ရေထဲဆင်းရတယ်။ သူကတော့မသိ ကိုယ်တွေကတော့ သူ့မြင်တာနဲ့ကို ချမ်းလွန်းတဲ့အတွက် ခြေထောက်တောင် ရေထဲမဆင်းပါဘူး။
ပါရမတ်ဘုရားကျောင်းဟာ အရှရမ် (Ashram) လို့ခေါ်တဲ့ ဘုရားကျောင်း အဖွဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့ ဂင်္ဂါပူဇာလုပ်တဲ့ နေရာအပြင် ယောဂသင်တန်းတွေ ဘာသာရေးသင်တန်းတွေရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်း အကြီးကြီးလည်းရှိသေးတယ် ကိုယ့်ဆီက အခေါ်အဝေါ်နဲ့ဆိုရင် ရိပ်သာလို့ခေါ်ရမှာပေါ့။ တကမ္ဘာလုံးကလာတဲ့ ယောဂစိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောဂီတွေအနေနဲ့ ၁၀ ရက် ၁ လ စသည်ဖြင့် ရိပ်သာဝင်လို့ရတယ်။ ရိပ်သာဝင်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ အစားအသောက် ရေရာထိုင်ခင်းတွေကို အရှရမ်အနေနဲ့ တာဝန်ယူပေးထားတယ်။ ရိပ်သာထဲကိုဝင်ကြည့်တော့ တရားပွဲတွေ လုပ်နေတာတွေ့တယ် နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း အတော်များများ တွေ့ရပါတယ်။
ရီရှိကေ့(ရှ်)ဟာ ညပိုင်းနောက်ကျလည်း လုံခြုံရေးက ပြဿနာမရှိပါဘူး အတော်လေး အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိပါတယ်။ လုံခြုံရေးအေးချမ်းတာ စိတ်ချမ်းသာရပေမယ့် ရာသီဥတု ချမ်းအေးလွန်းတာကျ နည်းနည်းဒုက္ခရှိပါတယ်။ ဟိမဝန္တာလေဟာ ညပိုင်းမှာတော့ အတော်ဆိုးပါတယ် လေတိုက်လိုက်တိုင်း အသားလေးတွေကို အပ်နဲ့ထိုးသလို ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဝတ်လာကြတဲ့ Hoodie လေးတွေကို နားရွက်ပေါ်မှာစိုးလို့ ယောင်လို့တောင် ခေါင်းဆောင်း မဖြုတ်ရဲပါဘူး။ ဘုရားကျောင်းတွေ လျှောက်သွားလိုက် မုန့်ဝယ်စားလိုက် လက်ဖက်ရည်သောက်နဲ့ ၉ နာရီထိုးလောက်မှပဲ ဟိုတယ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတာ လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေထဲ မျက်စေ့လည်နေလို့ ၁၀ နာရီလောက်မှပဲ ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ပြီး နောက်နေ့အတွက် အားမွေးရင်းနဲ့ အချိန်မဆိုင်းပဲ အိပ်ကြရတော့တယ်။